Madasha Badbaado Qaran oo ka digtay muddo kororsi | KEYDMEDIA ONLINE
Madasha Badbaado Qaran oo ka digtay muddo kororsi
War Saxaafadeed ay soo saartay Madasha Badbaado Qaran ayaa si adag looga soo hor jeestay Muddo kordhin loo sameeyo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo iyo Xubnaha Golha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madasha badbaado Qaran oo ay ku mideysan yihiin Maamullada Puntland iyo Jubbaland, Golaha Midowga Murashixiinta iyo Siyaasiyiinta Reer Waqooyi ayaa caawa si adag kaga soo hor jeestay in kulanka Baarlamaanka ee birri dhacaya muddo kordhin loogu sameeyo hay’adaha Dowladda.
“War saxaafadeed caawa ka soo baxay Madasha ayaa lagu yiri, “Madasha Badbaado Qaran waxa ay si adag kaga soo hor jeedda kordhinta xilka Madaxweynaha iyo Baarlamaanka muddo xiloodkoodii dhamaaday.”
Madashu waxa ay sheegtay in mudda xileedkii Baarlamaanka ay dhamaatay 28-kii December 2020, halka xil heyntii Madaxweynaha ay idlaatay 8 Febaraayo 2021, sidaas daraaddeed aan la aqbali kari wax muddo kordhin ah.
Madashu waxa ay sheegtay dhibkii soo gaara Xildhibaanada la sheegay in la ganaaxay in uu dusha saaranayo Maxamed Mursal oo wakiil ka ah muddo kordhinta la doonayo in Farmaajo loo sameeyo taas oo xildhibaanadu diideen.
Sidoo kale, Madashu waxa ay cambaareeyeen ciidamada ka tirsan Nabad Sugidda ee lagu soo daad gureeyay xurunta Golaha Shacabka.